China Yakakura fomati muchina UV Mbeu dzakauchikwa Printer Dhijitari Flex Banner Kudhinda Mashini vagadziri uye vanotengesa | Ntek
Yakakura fomati muchina UV Hybrid Printer Mutengo Dhijitari Flex Banner Kudhinda Muchina
Ntek YC3200HR chizvarwa chitsva, mhando kusimudzira hombe fomati UV yakasanganiswa purinda yakanyanya kugadzirirwa premium maindasitiri ekugadzirisa mabhizinesi kusangana nezvinodiwa zvakasiyana-siyana. Maximum yekudhinda upamhi ndeye 3300mm, iine akawedzera masherufu akatenderedza 2000mm kumberi nekumashure kune akaomarara midhiya kudhinda sarudzo. Iyo yakanaka kune iro bhizinesi rine rakakura rakadhindwa zvinhu zvine chaiyo chaiyo, yakasimba uye yakasimba purindaini yavo yakanaka kwazvo inoshanda basa.
Yakashongedzerwa neRicoh GEN5 / GEN6 grey-scale piezoelectric anodhinda misoro, YC3200HR purinda inogona kudhinda 4-8 mavara, anosanganisira cyan, magenta, yero, nhema, mwenje magenta, mwenje cyan, chena uye varnish sarudzo yeiyo-yemhando yekudhinda. Izvo zvinoenderana nezvinodiwa zvekumhanya uye neinoburitsa kudhinda mhando yemhando.
Iyo dhizaini yekumhanyisa mhanyisa inosvika 40-60 mativi emamita paawa, neiyi inomhanyisa kumhanya kusangana nevatengi kukumbira neiyo hi-kumhanya uye hi-chaiyo.
Uye zvakare, iyo yakasarudzika chena inki modhi uye varnish modhi yakanakira kudhinda jira remadziro, bepa remadziro, flex banner, mesh, vinyl, dehwe nezvimwe zvinogadziriswa zvinhu zvine glossy pamusoro uye chengetedzo yakanaka.
Kune iyi yakasanganiswa purinda, zvakare inogona kupurinda pane akaomarara sheet midhiya, senge girazi, huni, acrylic, zvedongo tile, PVC, furo bhodhi, PP, nezvimwe. Saka zviri nyore kuti mutengi azive basa rese rekudhinda mune mumwe muchina.
Ntek UV yakasanganiswa yakakura fomati UV LED inkjet printer mhuri inosanganisa mibairo-kuhwina mhando yekudhinda ine yakanyanya kugadzirwa, uye yakaderera inki yekushandisa. Gadzira yakatsetseka, idzi dzakauchikwa UV inkjet workhorses inodarika zvinotarisirwa nguva dzese.
Mune maNtek UV emahara anodhinda ma LED, iwe uchawana rinorema-basa, rakakomberedzwa rakavakirwa mabhatani ayo ari nyore kubata zvakanyanya basa rakawandisa, kuwanda-kwekuchinja mashandiro uye 24/7 kudhinda. Inokodzera dzakasiyana siyana dzakaomarara uye dzinochinja-chinja substrates, aya maprinta anokupa iwe zvisingaverengeki sarudzo kuti ugadzire anotora maziso-makuru mafomati anodhinda. Ivo vanokwanisa kuendeswa mukumisikidzwa kwakasiyana nemamwe maotomation sarudzo.
3 Mitsetse Ricoh GEN5 / GEN6 UV anodhinda musoro, matatu marudzi nzira yekudhinda:
1.CMYK + WW + CMYK Ruvara Rumwechete rweMasikati neusiku
2.WW + CMYK + VV Yakanaka kwazvo kupedzisa, kunyanya kune Wallpaper kudhinda
3.CMYK + CMYK + CMYK Yekumhanyisa UV kudhinda, 6pass yakatenderedza 40sqm / h, 4pass yakatenderedza 60sqm / h
UV inorapa inki inogona kudhinda mumhando dzakasiyana siyana uye zvakare ine hushamwari, iine mabhenefiti maviri aya makuru, inozopedzisira yatsiva echinyakare kushambadzira kwekunze uye zvemukati zvemuchina wekudhinda michina, uyezve, shandisa zvakanyanya mumhuri yekushongedza yemunda munda.
Pashure: YC1016 Ceramic Tile Dhijitari Kudhinda Muchina
Zvadaro: 6090 NTEK Flat Bed Phone Cover Cover Printing Machine Kutengesa
Kudhinda Bhainda Dhijitari
Flex Banner Kudhinda Muchina
PVC Banner Kudhinda Machina
Yekumusoro kumusoro Banner Kudhinda Muchina
Uv Banner Kudhinda Muchina